Dagaal Ooge hore oo loo magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Axmed Madoobe iyo Cabdi Rashiid Xidig oo loo doortay Madaxweynayaasha 'Jubbaland'.
Doorashooyin iskasoo horjeeda oo ka socda magaalada Kismaayo.
Tuesday July 03, 2018 - 12:02:02 in Wararka by Super Admin
Magaalada Nawaashood ee caasimadda wadanka Muritaaniya waxaa lagusoo gaba gabeeyay shirkii 31-aad oo ay isugu yimideen hoggaamiyaasha qaaradda.
Kulanka Ururka Midowga Afrika ayaa ciwaan looga dhigay "Ka guuleysashada Musuq Maasuqa" balse khudbadihii ay jeediyeen madaxweynayaasha kasoo qeyb galay ayay diiradda ku saarayeen arrimaha ammaanka iyo ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Max'med Weldu Cabdi Caziiz oo ah madaxweynaha Muritaaniya ayaa khudbaddii uu ka jeediyay kulanka wuxuu ku sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee ku hor gudbadan madaxda Afrika ay yihiin ammaanka iyo Musuq Maasuqa wuxuuna ku baaqay in si daacadnimo ah caqabadaha jira wax looga qabto.
Dagaalka lagula jiro jamaacaadka Jihaadiga ah ayay madaxda Midowga Afrika ku sheegeen in dhaqaale aad ufarabadan ku bixiyaan, madaxweynaha Faransiiska oo madasha kulanka ku sugnaa ayaa ku guubaabiyay hoggaamiyaasha Afrika in ay sare uqaadaan dagaalka ka dhanka ah jamaacaadka jihaadiga ah oo uu ku sifeeyay kuwa Argagaxisa ah.
Madaxweynayaasha qaaradda Afrika ayaa walaac ka muujiyay dagaalka jihaadka ah ee kusii fidaya qaaradda sida wadamada dhaca mandiqadda Saaxil,geeska Afrika iyo waqooyiga qaaradda oo jamaacaad islaami ah ka halgamayaan.
Midowga Yurub Oo Jaray Kala bar qarashkii uu siin jiray ciidamada Kenya ee ku duulay Soomaaliya.
Dhageyso: Muxuu Socdaalka Kheyre Ka Bedeli karaa Khilaafyadii iyo kala taggii Maamulka Galmudug?.
Al Shabaab Oo War Cusub kasoo saartay Weerarka Ka Socda Hoteel kuyaal magaalada Kismaayo.
Xarakada Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyada weerar xooggan oo ka socda hotel kuyaal magaalada Kismaayo
Sawirro: Itoobiya Oo qarka u saaran in ay yeelato Biya Xireenka Ugu Weyn qaaradda Afrika.
Taliye Katirsan Ciidamada AMISOM oo sheegay in Al Shabaab aan looga adkaan karin dagaalka ka socda Soomaaliya [Warbixin].